Maamulka Koonfur Galbeed iyo Hay’addaha samafalka oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maamulka Koonfur Galbeed iyo Hay’addaha samafalka oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah
Maamulka Koonfur Galbeed iyo Hay’addaha samafalka oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Koofur galbeed Soomaaliya, Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay in ay degaannada KG ka wadaan xog uruurin ku aaddan heerka xaaladaha Bini’aaddamnimo iyo baahiyaha halkaasi ka jira.
Wasiir Caruush oo la hadlayay warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in Magaalada Baydhabo ay kula kulmeen qaar ka mid ah hay’adaha samafalka iyo NGO’yada maxalliga ah si ay ugu jawaabaan digniinta ay Wasaaraddiisu soo saartay Todobaadkii hore iyo sidii loo dersi lahaa.
Wasaaradda gargaarka KG ayuu sheegay in ay dejisay qorshe soconaya Saddex Sano, kaas oo loogu tala galay in si dhib yar loo wajaho haddii ay dhacaan musiibooyin kala duwan iyo sidii loogu diyaar-garoobi lahaa.
Wasiirka ayaa sheegay in dalagyadii la beertay ay cuneen Cayayaanno kala duwan xilligii kale ee la filayay Roobabkuna ay baaqdeen, taasoo ay ugu sii biirtay xaaladda Cudurka Coronaha oo sababay sicir barar iyo dhibaatooyin kale.
Naasir Cabdi Caruush, Wasiirka Wasaaradda gar-gaarka KG ayaa wuxuu madaxda Dowladda dhexe uga mahad celiyay doorkii ay ku lahaayeen ka jawaabista xaaladaha Bini’aadamnimo ee halkaasi ka jirta.
Maamulka Koonfur Galbeed iyo Hay’addaha samafalka oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah was last modified: June 24th, 2020 by Admin
Faahfaahin ka soo baxaysa duqeyn ka dhacday deegaanka Saaxa Weyn
Gudoomiye Cabdi Xaashi Iyo Xildhibaano Oo Ku Biiray Shirka Musharaxiinta Madaxweynaha
DEG DEG: Wasiir ka tirsan xukuumadda Kheyre oo isku casilay xiisadda Koonfur Galbeed
AKhriso:-Ra’iisul Wasaare Khayre oo cambaareeyay weerarkii manta kadhacay Dugsiga Tababarka Booliska